BEESHA MUUSE ISMAACIIL EE HY AYAA TAAGEERO MUG LEH UU MUUJISAY GOLAHA WADA TASHIGA IYO TOOSINTA SOMALILAND | Salaan Media
BEESHA MUUSE ISMAACIIL EE HY AYAA TAAGEERO MUG LEH UU MUUJISAY GOLAHA WADA TASHIGA IYO TOOSINTA SOMALILAND
New York(SM)Jaaliyada North America ee beesha Muuse Ismaaciil ayaa shir ay maanta isugu yimaadeen xaga isgaadhsiinta waxa ay isla qaadaa dhigeen arimo badan oo ku saabsan beesha iyo deegaanada ay degto. Shirkan oo ay ka soo qayb galeen badiba jaaliyada Beesha Muuse Ismaaciil ee ku dhaqan waqooyiga America ayaa waxa dadkii ka soo qayb galay shirkaa ka mid ahaa waayeelka, wax garadka, aqoonyahanka, culimada, haweenka iyo dhalinyarada beesha. Jaaliyada beesha Muuse Ismaaciil ee Waqooyiga America ayaa shirkan ka soo saaray war murtiyeed u dhignaa sidan;
Kadib Markii aanu aragnay dayaca iyo daryeel laanta baahsan eek a jirta Gobolada iyo Deegaanada ay degto beeshu (Sanaag & Togdheer).
Markii aanu Xaqiisanay in aanay jirin haba yaraatee wax laga qabtay Deegaanada ay degto beesha Muuse Ismaaciil,
Iyadoo aynu ognahay in ay beeshani ka qaadatay kaalin mugleh halkankii lagu xoraynayay dalka,isla markaana u hortay naf iyo maalba,
Ayadoo beeshu iskeed isku xilqaantay hirgelinta nidaamka dawladnimo ee ee deegaanka beeshu degto taageero la’aan,
Iyadoo aynu ognahay in Gobolka Sanaag khaas ahaan laga hirgeliyay nidaamka dawladnimo ee Somaliland ku faanto iyadoo Caasimada Hargeysa iyo Burcoba Dagaalo Sokeeye ka socdaan,
Iyadoo aynu ognahay kaalintii ay Beesha Muuse Ismaaciil ka soo Qaadatay Nabadayntii Beela Somaliland isla markaana beeshani marti gelisay Shirkii Nabadaynta Beelaha Somaliland khaasatan Bariga Somaliland,
Ka dib markii aanu aragnay in Beesha Muuse Ismaaciil oo degta Gobolada Sanaag iyo Togdheer aanay ka helin Saamigii ay ku lahaayeen Dawladihii kala danbeeyay ee Somaliland, isla markaana beeshu ay ku samraysay danta guud ee dalka,
Ka dib markii aanu aragnay in aan deegaanada Beesha aanay soo gaadhin wax mucaawino ah ama saami qaybsiga mashaariicda kala duwan,
Ka dib markii waxba laga qaban waayay cabashooyin badan oo beeshanu u gudbisay dawladihii kala danbeeyay,
Markii aanu xaqiiqsanay in beeshanu aanay ku haysan Cadaalad Somaliland isla markaana aan haba yaraatee wax tixgelin ah la siinin,
Iyadoo aanu ognahay in deegaanada Beesha aan laga hirgelin dhamaanba waxyaabaha Aasaaska u ah nolosha biniaadamka sida, biyo gelin, waxbarasho, goobo caafimaad, wadooyin IWM. Waxay qurba jooga Beesha Muuse Ismaaciil ee North Amerika soo saareen go’aamadan iyo talooyinkan;
In la sameeyo Gudi joogta ah oo ay leedahay Beeshu.
In beeshu ay samayso gudi anshax oo talaabo ka qaada cid kasta oo ka hortimaada Go’aamada Beesha
In la mudeeyo wakhtiga shirka isla markaana la siiyo wakhti ku filan qurba joogta si ay uga soo qayb galaan
In la sameeyo gudi dar-dargelisa qaban-qaabada iyo qabsoomida Shirka
Waxaanu taageero Buuxda Siinaynaa shirka Beesha Muuse Ismaaciil ku balansantahay bilaha soo socda ee lagu qaban-doono Magaalada Ceerigaabo.
In dhamaan Madax-dhaqameedka, siyaasiyiinta, culimada, haweenka, iyo dhalinyarada Beesha Muuse Ismaaciil ay ka midaysnaadaan danaha beesha Gudo iyo Dibedba.
In Beeshu ka arinsato aayaheeda Deegaan, Dhaqaale, Siyaasadeed, iyo Waliba Xidhiidhka ay la leedahay Beelaha kale.
In laga bilaabo manta oo ay taariikhdu tahay 8/6/13 lagala noqdo kalsoonida Xukuumada Somaliland
In dhamaanba Xildhibaanada beesha eek u jira Guurtida, Wakiilada, Xukuumada , iyo Golayaasha deegaanadu ay iska casilaan Xilalka ay hayaan,
Iyo ugu danbayntii in ay Beeshu ka arinsato kana fiirsato in Beesha Muuse Ismaaciil iyo deegaanadeeduba ay ka sii mid ahaadaan Somaliland iyo in kale.
Maxamed Jibriil Cumar-
Afhayeenka Beesha Muuse Ismaaciil ee North America.